Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Fiji News Breaking » Fiji wuxuu ku sii jeedaa xagga dalxiiska oo dib loo furayo Diseembar 2021
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Fiji News Breaking • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Tallaal kasta wuxuu Fiji u soo dhoweynayaa hal talaabo inuu awood u yeesho inuu mar kale jasiiradaha ku soo dhaweeyo martida caalamiga ah.
In ka badan 92% dadka Fiji bartilmaameedsaday ayaa qaatay qiyaastii ugu horreysay ee tallaalka COVID-19.
Dalxiiska Fiji ayaa bilaabay hindise cusub oo maxalli ah si loo dhiirigeliyo tallaalka.
Warshadaha dalxiiska Fiji ayaa si ballaaran u qaatay Ballan -qaadkii Daryeelka Fiji.
Iyada oo in ka badan 92% dadka bartilmaameedka ah la siinayo qaddarkoodii ugu horreeyay ee tallaalka COVID-19 iyo in ka badan 41% ayaa hadda si buuxda loo tallaalay, Fiji waxay sameyneysaa horumar la taaban karo oo ku wajahan hadafkeedii ahaa in dib loo furo Diseembar 2021, maaddaama tallaal kasta uu Fiji u soo dhoweynayo hal talaabo awood u leh inay mar kale ku soo dhaweeyaan jasiiradaha martida caalamiga ah.
"Waxaan ku jirnaa isgoysyada da 'cusub ee safarka iyo dalxiiska halkaas oo dib-u-bilaabashada socdaalka caalamiga ah lagu dhejiyay xabbad lacag ah-tallaalka COVID-19," ayuu yiri Wasiirka Ganacsiga, Ganacsiga, Dalxiiska iyo Gaadiidka, Hon. Faiyaz Koya. “Tallaalidda dadka aan beegsaneyno kaliya ma xaqiijinayso inaan ilaalinno bulshooyinkeenna, laakiin sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan dunida ku soo dhaweyno xeebaheenna oo aan reer Fiji dib ugu soo celinno shaqooyinkii ay jeclaayeen.”
Iyada oo qayb ka ah diyaarinta dib-u-furista Fiji, Dalxiis Fiji wuxuu bilaabay hindise cusub oo maxalli ah oo lagu dhiirrigelinayo dhammaan dadka reer Fiji inay is tallaalaan oo ay diyaar u yihiin safarka inay dib u bilaabaan marka xannibaadaha la qaado. Waa farriin fudud, laakiin mid muhiim ah: “Waa tallaalkayagii ugu fiicnaa ee safarka: is tallaal oo is diyaari.” Ololuhu wuxuu ku biirayaa farriinta Dalxiiska Australia si ay u wadaagaan taageerada iyo dhiirrigelinta tallaalka oo dhan Fiji.
Si loo hubiyo caafimaadka iyo nabadgelyada ugu badan ee socdaalayaasha iyo dadka deegaanka ee ku sugan xuduudaha dib loo furayo, Warshadaha dalxiiska Fiji wuxuu si ballaaran u qaatay Ballan -qaadkii Daryeelka Fiji; halbeeg ay oggolaatay WHO oo ah tallaabooyinka ugu wanaagsan ee caafimaadka iyo tallaabooyinka badbaadada ee loogu talagalay in lagu waafajiyo warshadaha si waafaqsan xeerarka socdaalka nabdoon ee dunnida COVID kadib. Hawlwadeennada dalxiiska ayaa ka shaqeynaya sidii ay u gaari lahaayeen 100% tallaalka dhammaan shaqaalaha u qalma waxayna heli doonaan CFC 100% Stamp Tallaalka marka la dhammeeyo. Ilaa hadda, waxaa jira 46 goobo-dalxiis oo Fiji ah oo ku guuleystay 100% tallaalka shaqaalahooda.
Intaa waxaa sii dheer, Dalxiiska Fiji Waqooyiga Ameerika wuxuu bilaabay olole suuq -geyn is -dhexgal ah, oo loo yaqaan "Find Your Bula" si loogu dhiirrigeliyo macaamiisha inay bilaabaan riyooyinka iyo qorsheynta safarkooda ugu fiican Fiji. Ololuhu wuxuu udub dhexaad u yahay su’aalo lagu caawinayo dadka socotada ah si ay u helaan ‘Bula’ oo ay u helaan talooyin safar oo u dhigma dooqooda. Ololuhu wuxuu ka ciyaaraa salaanta Fiji -ga “bula” - erey leh macno badan oo ay ka mid yihiin hello, farxad, caafimaad wanaagsan, iyo tamarta nolosha.